Chrome 86 wuxuu la yimid isbeddelada URL, hagaajinta ilaalinta iyo wax badan | Laga soo bilaabo Linux
Chrome 86 wuxuu la yimid isbeddelada URL, hagaajinta ilaalinta iyo waxyaabo kale oo badan
Xulka wararka oo dhan | | La cusboonaysiiyay 11/10/2020 00:29 | Aplicaciones
Maalmo ka hor nooca cusub ee biraawsarka caanka ah ee loo yaqaan «Chrome 86» ayaa la sii daayay taas oo dhowr waxyaalood oo cusub ayaa lagu soo daray, gaar ahaan xagga amniga, labadaba aaladaha Apple iyo Android.
Marka lagu daro hagaajinta caadiga ah ee gudaha, Google Chrome 86 wuxuu leeyahay muuqaal aad u xiiso badan oo ka caawiya isticmaalaha inuu si dhakhso leh u beddelo ereyada sirta ah ee nugul isla markaana kaa ilaaliyo websaydhada ku lumiya ilahaaga CPU (iyo awoodda batteriga) ilbidhiqsiyo siman.
1 Chrome 86 wararka ugu waaweyn
1.1 Sidee loo rakibaa Google Chrome 86 Linux?
Chrome 86 wararka ugu waaweyn
Noocaan cusub ee biraawsarka wuxuu la socdaa isbeddelo kala duwan, laakiin ugu fiican waan heli karnaa shaqada cusub kaas oo ficil ku kacaya xilligan Chrome wuxuu ogaadaa in furaha sirta ah wax laga badalay.
Taas ka sokow maareeyaha cusub ee furaha ayaa kaa caawin doona inaad bedesho furaha sirta ah ee xaday mid cusub. Chrome waxay sidan ku samayn doontaa adiga oo kugu hagaya bogga dib u habeynta sirta ah ee websaydhka su'aasha laga qabo. Taasna waa ku mahadsan tahay, dib u dejinta lambarka sirta ah waa hawl fudud oo dhakhso leh.
Chrome 86 sidoo kale waxaa ku jiri doona digniino isku dhafan labadaba kumbuyuutarrada iyo noocyada 'Android' si ay u feejignaadaan ugana digaan isticmaalayaasha ka hor intaadan soo gudbin foom aan amni ahayn oo ku duugan bogga HTTPS. Bog furaha ayaa hadda xayiraya ama ka digaya soo degsasho aan amaan aheyn oo ay bilaabeen bogag aamin ah.
Waxyaabaha kale ee isbeddelada ka muuqda ayaa ah in qafis dib u dhac ah la hirgeliyay, markii la daalacanayay bogagga hore loo daawaday ee bogga hadda jira. Khasnadda waxaa awood loo siiyay iyadoo la marinayo dariiqa qaabeynta soo socda: chrome: // flags / # back-forward-cache.
Sidoo kale, noocani cusub wuxuu hagaajinayaa mid ka mid ah cabashooyinka ay inta badan helaan dadka isticmaala waana taas in Chrome 86 ayaa ka dhigay fiicnaanta isticmaalka ilaha processor daaqadaha laga gaaro.
Chrome wuxuu hubiyaa haddii daaqada biraawsarka ay daaqadaha kale isku laaban yihiin waxayna ka hortagtaa in pixels lagu sawiro aagagga is dul saaran. Kicinta waxa loo sahlay boqolkiiba in yar oo isticmaaleyaasha ah ee ku jira Chrome 84 iyo 85, haddana meel walba way ka hawlgashaa. Marka loo barbardhigo noocyadii hore, waxaan sidoo kale wax ka qabanay is-waafajin la'aanta nidaamyada hufnaanta ee sababayay bogagga cad ee maran inay soo baxaan.
Intaa waxaa dheer, the hagaajinta kaydka kheyraadka ee taariikhaha asalka ah. Tabsyadan mar dambe ma cuni karaan wax ka badan 1% ilaha processor-ka lagamana shaqeyn karo wax ka badan hal mar daqiiqaddii. Shan daqiiqo ka dib asalka, tabyadu way barafoobaan, marka laga reebo tabsyada ciyaara ama duubaya waxyaabaha ku jira warbaahinta.
Shaqadii mideynta madax-adeegsiga HTTP User-Agent ayaa dib loo bilaabay. Nooca cusub, ee Taageerada farsamooyinka tilmaamayaasha Macaamiisha-Wakiilka waa la shaqeysiiyay dhammaan isticmaaleyaasha, taas oo loo soo saaray beddel ahaan Wakiilka-Wakiilka.
Farsamadan cusub waxay ku lug leedahay gudbinta xulashada xogta ee ku saabsan biraawsar gaar ah iyo xuduudaha nidaamka (nooca, barxadda, iwm.) Kaliya ka dib codsi ka yimid serverka oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay si xulo leh u siiyaan macluumaadka noocaas ah milkiilayaasha goobta.
Markaad isticmaaleyso Tilmaamaha Macaamiisha-Wakiilka, aqoonsiga looma gudbin karo si aan caadi aheyn iyada oo aan la helin codsi cad, taas oo ka dhigaysa aqoonsi aan macquul ahayn (markii hore, kaliya magaca biraawsarka ayaa la muujiyay).
Marka lagu daro hal-abuurnimada iyo cilladaha cayayaanka, 35 nuglaanta ayaa lagu baabi'iyay nooca cusub. Mid ka mid ah waa u nuglaanta (CVE-2020-15967, helitaanka aagga xusuusta ee lagu sii daayay koodhka si loola macaamilo Google Payments) ayaa loo calaamadeeyay inay muhiim tahay, taas oo ah, waxay u oggolaaneysaa in laga gudbo dhammaan heerarka ilaalinta biraawsarka isla markaana lagu fuliyo koodhka nidaamka ka baxsan deegaanka sanduuqa ciidda.
Ugu dambeyntii iyada oo qayb ka ah barnaamijka Lacagta Lacagta nugul ee nugul nooca hadda, Google waxay bixisay 27 abaalmarin wadar ahaan $ 71,500 (hal $ 15,000, saddex $ 7,500, shan $ 5000, laba $ 3000, mid $ 200, iyo labo $ 500).
Sidee loo rakibaa Google Chrome 86 Linux?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Chrome 86 wuxuu la yimid isbeddelada URL, hagaajinta ilaalinta iyo waxyaabo kale oo badan
vkd3d 1.2 wuxuu la yimaadaa hagaajin is waafajin, hoos iyo waxyaabo kaloo badan
Calla, waa nidaam wadahadal fiidiyoow ah oo ka shaqeeya Jitsi laakiin taabasho gaar ah leh